Inhliziyo I-China Oil Cooler Yabakhiqizi Benjini YamaShayina nabaphakeli |CCMIE
Singakwazi ukuhlinzeka nge-cooler kawoyela yohlobo lwamaShayina, i-Chinese JMC FORD injini epholile, i-Chinese WEICHAI Engine Oil cooler, i-Chinese Cummins Engine Oil cooler, i-Chinese Yuchai Engine Oil cooler, i-Chinese Cummins Engine cooler, i-Chinese JAC Engine Oil cooler, i-Chinese ISUZU Isipholile Samafutha Enjini, isipholile se-Chinese Yunnei Engine Oil, isipholile se-Chinese Chaochai Engine Oil, isipholile se-Chinese Shangchai Engine Oil.
ukuhlukaniswa kwe-oil cooler
① Isipholile sikawoyela wenjini: sipholisa uwoyela wokugcoba wenjini, sigcina izinga lokushisa likawoyela linengqondo (amadigri angama-90-120), futhi i-viscosity inengqondo;indawo yokufaka iku-cylinder block yenjini, futhi ifakwe ngokuhlangene nezindlu ngesikhathi sokufakwa.
②Isipholisa uwoyela wokudlulisa: Sipholisa uwoyela wokugcoba wokudlulisela.Ifakwe ekamelweni eliphansi lamanzi le-radiator yenjini noma ngaphandle kwekesi lokudlulisela.Uma ipholile emoyeni, ifakwa ohlangothini olungaphambili lwe-radiator.
③ I-Retarder oil cooler: Ipholisa uwoyela wokugcoba lapho i-retarder isebenza, futhi ifakwa ngaphandle kwebhokisi likagiya.
Ngakolunye uhlangothi, ngokuvamile ziyimikhiqizo eyinhlanganisela yegobolondo neshubhu noma kawoyela wamanzi.
④ I-exhaust gas recirculation cooler: Kuyidivayisi esetshenziselwa ukupholisa ingxenye yegesi yokukhipha umoya ebuyiselwe kusilinda senjini, inhloso iwukunciphisa okuqukethwe kwama-nitrogen oxide kugesi yokukhipha imoto.
⑤ Imojula yokupholisa i-radiator: Kuyidivayisi ekwazi ukupholisa ngesikhathi esisodwa izinto eziningi noma ezinye izinto ezifana namanzi okupholisa, amafutha okugcoba, umoya ocindezelwe, njll. Imojula yokupholisa yamukela umbono wokuklama odidiyelwe kakhulu, osebenza ngokugcwele, usayizi ogcwele, usayizi omncane. , kanye nobuhlakani.Izici zokusebenza okuphezulu.
⑤I-Air cooler, ebizwa nangokuthi i-intercooler, iyisisetshenziswa esisetshenziselwa ukupholisa izinga lokushisa eliphezulu nomoya womfutho ophezulu ngemva kokushajwa kwenjini.Ngokupholisa i-intercooler, izinga lokushisa lomoya ogcwele kakhulu lingancishiswa, ngaleyo ndlela kwandiswe ukuminyana komoya, ukuze kufezwe inhloso yamandla enjini, ukusetshenziswa kukaphethiloli kanye nokunciphisa ukungcola.
Okwedlule: Iphampu kawoyela yenjini yamaShayina
Olandelayo: Fuel Injector Engine izingxenye ezisele
I-3067459 i-Rocker chamber cover gasket
3037535 isixhumi se-NT855
4061380 ipayipi lamanzi
Inzwa engu-3035028 ye-NT855
4951495 iphampu yamafutha
4058969 indandatho kawoyela